मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता ! – NewsAgro.com
मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता !
December 18, 2017 December 18, 2017 newsagro0Comments क्यान्सर र मेरुदण्डका बिरामीलाई भत्ता, क्यान्सर र मेरुदण्डमा चोट, मिर्गौला, स्वास्थ्य
यो समाचार 477 पटक पढिएको
काठमाडौं, पुस ३ गते । सरकारले बिरामीहरुलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रति महिना पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्डमा चोट (स्पाइनल इन्जुरी) को उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि प्रतिमहिना ५ हजार भक्ता उपलब्ध गराउन लागिएको हो । गम्भीर रोगकै कारण आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने हुँदा बिरामीलाई आवाश्यक जोहो गर्न पनि अप्ठेरो पर्दा परिवारलाई समेत आर्थिक भार थपिने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
← राष्ट्रिय मकैबालीको प्राथमिकतामा हाइब्रिड मकै कार्यक्रम
काँक्रोको तितोपना यसरी नष्ट गरौं →